… Yomphefumlo wakho, nangaphezulu. -Izixhobo zeGeofumadas
… Yomphefumlo wakho, nangaphezulu.
Matshi, 2010 Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
Ndawubamba ngobunono umzi womnyango, ngaphandle koloyiko lokuba imiqondiso yam yedijithali iya kumiliselwa kubukhali bebronze, nditshaye ngesimbo sobukoloniyali, ndicatshukiswa ngamanqatha omsebenzi wam phantsi kweemoto ezi-5 ezingasazikhumbuliyo ezo, ezo ndizibonileyo kunzima ukuzibona zithe tyaba. Ndijike ngasekhohlo iidigri ezingama-83 eziyimfuneko kulwakhiwo lwe-bolt, olukhawuleze lwakhupha i-halo epholileyo kwimeko yangaphakathi, ngokuchaseneyo nobushushu obubulalayo beRímac River Valley, ebumnyameni ihotele entsha ilahlekile, indala ikhaliphile. ngesiqingatha senkulungwane ngokungathandabuzekiyo kwisitayile sokwakha sokuqala.
Iidigri ezingama-27 zokuvulwa zanele ukuba ukukhanya kwangaphakathi okukhanyayo kukhanyise izidlele zam ezixhalabileyo, ukubeka ngaphezulu kwempumlo kwelo gumbi ligcwele ukubila, njengehashe eliphuhliswe kwiifama zesundu esincinci seAfrika. Ndivile kumaqondo angama-49, 52, 58.5 ndaphantse ndadlula, ndathoba umnqwazi wam ongumbala ongwevu, ndaliva umkhenkce ongaphakathi kwiitempile zam ezazibile, ezinweleni zam zimanzi ukusuka kwiiyure ezili-16 zomsebenzi wokoqobo ukuya ukuhlenga.
Ngasemva, ndibone amanqaku aphezulu e-curls akho, amaxesha egolide, amaxesha abrown, ajike abomvu, litmus. Kunzima oko, okushiyekileyo kuyimbonakalo yenyani yokwenyani phantsi kwephepha elimhlophe elinemodeli yedijithali eguqule umfanekiso wakho, ulinganisa iidigri ezili-18 zokubeka imeko kwii-BTU ezisi-8 ezaneleyo. Ngobunono, ndaluvala ucango ngasemva, ndalahla ityesi leyo Targus Ngenceba emhlabeni, yaduma i-hard drive yangaphandle ngokuqinisekileyo eyayingasemva, incinci okanye akukho nto ibalulekileyo. Ukusukela ngoko ndaziva ukuba ubushushu bakho babunyusa njani ubushushu bam, yandibiza ndingakhange nditsho nto, yandityhala isithi yiza kanye! Ndingaweva amazwi akho kuwo onke amabunzi esikhumba sam. Iimitha ezi-5, zine, zintathu, zisiwa njengeengubo zokugqitha kwam.
Emva koko, amehlo am aqhele ubumnyama bomgca wakho, ndabona ukuba i-bodice e-beige eqaqambileyo, efaka ii-motifs ezimbini ezoneleyo emphefumlweni, kwisiketshi esithambileyo njengepensile ye-4H ephawulwe ngokugqwethayo ezantsi. Ngokuphuculwa okucacileyo, ii-cusps eziphakathi kwetropic zivelise kwiibhombu ezincinci, zihambelana neeplanethi zomzuzu, kwisiqingatha sokugqibela seyure sokulinda, imiyalezo engama-23 yelogarithm, ngokuchaseneyo nomgama. Kwikota ukuphakama, iphepha laligubungela okuseleyo, lishiya umbono oguqula ithambo elenza esinqeni sakho, kunye nemilenze yakho ekuvaleni ekupheleni kweenyawo kwelinye.
Ndahamba, ndeva umphefumlo wakho usondela xa wawuthatha izidlele zam, wandikrwela iindevu zam ezicacisiweyo, xa wawuthatha ihempe yam wayisondeza kangangokuba ndade ndafunga ndathi ndibona i-carbuncle ebengezela. Incasa yeswiti yakho inamathele kwimilebe yam, kwaye ndive emphefumlweni wakho ivumba lakho, lixutywe nencasa engenakuthelekiswa nanto yabafundi bakho ezazifihlwe ngasemva kwamakhethini eenkophe zethenda.
Ndacinga ngaphakathi kwee-echoes, ukwehla ngokuthe ngcembe kwesiqholo sakho, ezantsi komqolo wakho, ngesisu sakho, ngobomi bakho. Ndicinge ukubetha okunamandla kwegazi lakho, emilebeni yakho, emehlweni akho, kwiitempile zam. Ndaziva ndinyani njengentlungu yomongo ngaphakathi ngaphakathi, ndinqwenela ukulila, ukuhleka, ukufa. Ndacinga umphefumlo wakho, ubuso bakho, i-silhouette yakho, ukusuka emnyango, ukuba ivule ...
Ndichukumise isiphatho kwakhona, ndachukumisa iinkuni kwakhona, ndibuyele egumbini lam, ndamisa inyawo emhlabeni okwesithathu kunye nexesha lokugqibela.
Ndandiqonda inyani engunaphakade kwaye ekuphela kwayo. Khange ufike.
Post edlulileyo«Ngaphambilini … Phi
Post Next Izikhombisi ezi-7 zeGeofumado moodOkulandelayo »